६ घन्टाको विश्वव्यापी अवरोधपछि फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पुनः सञ्चालनमा, के थियो समस्या ? - Arthasansar
६ घन्टाको विश्वव्यापी अवरोधपछि फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पुनः सञ्चालनमा, के थियो समस्या ?
मंगलबार, १९ असोज २०७८, ०७ : ४० मा प्रकाशित
करिव ६ घन्टा विश्वव्यापी अवरोधपछि फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । अबरोध हुँदा अर्बौँ प्रयोगकर्ताले सेवा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । आफ्ना सेवाले शत प्रतिशत काम गर्न भने केही समय लाग्ने फेसबुकका प्रमुख प्रविधि अधिकृतले बताएका छन् ।
नेटवर्क समस्या समाधान गर्न र डिजिटल मञ्चलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन आफ्ना प्राविधिज्ञले सक्दो छिटो काम गरेको फेसबुकले जनाएको छ । नेटवर्कमा कसरी समस्या आयो भन्ने वारेमा फेसबुकले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि सन् २०१९ मा पनि फेसबुकमा अवरोध भएको थियो ।
ताप्लेजुङमा तीन दिनदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध, बैंकिङ कारोबारमा समेत समस्या
नेपाल टेलिकमकाे अटम अफर : ग्राहकलाई फाइदै फाइदा
दशैँ तिहारको बिदामा टेलिकमका ग्राहक सेवा केन्द्र खुल्ला नै रहने
६ घन्टा बन्द हुँदा फेसबुकको सेयर मूल्य ४.९ प्रतिशतले घट्यो, जुकरबर्गलाई ६ अर्ब घाटा